Tsy nitsaha-nitombo ny fako ara-tsakafo satria nitombo ny isan'ny mponina ary nitombo ny isan'ny tanàna. Sakafo an-tapitrisany taonina no atsipy any anaty fako erak'izao tontolo izao. Manakaiky ny 30% ny voankazo, legioma, voamaina, hena ary sakafo fonosana eran-tany no ariana isan-taona. Nanjary olana goavana teo amin'ny tontolo iainana ny fako sakafo. Fako be dia be no miteraka fandotoana lehibe, izay manimba ny rivotra, ny rano, ny tany ary ny zava-manan'aina. Etsy ankilany, ny fako ara-tsakafo dia manapotika anaerobika hamokatra gazy entona toy ny metana, gazy karbonika ary famoahana hafa manimba. Ny fako ara-tsakafo dia miteraka entona mitentina 3,3 miliara taonina. Ny fako ara-tsakafo kosa dia natsipy any anaty fanariam-pako izay maka tany marobe, mamokatra entona mando sy vovoka mitsingevana. Raha tsy voatana araka ny tokony ho izy ny leachate novokarina nandritra ny fanariam-pako dia hiteraka fandotoana faharoa, fahalotoan'ny tany ary fahalotoan'ny rano ambanin'ny tany.
Misy fatiantoka lehibe ny doro tanety sy ny fanariam-pako, ary ny fampiasana fako sakafo fanampiny dia hanampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary hampitombo ny fampiasana ireo loharano azo havaozina.
Ahoana ny fomba hamokarana ny fako ho zezika organika.
Ny voankazo, legioma, vokatra vita amin'ny ronono, serealy, mofo, zaridaina kafe, atody, hena ary gazety dia azo zezika avokoa. Ny fako ara-tsakafo dia mpamatsy composting tsy manam-paharoa izay loharano lehibe amin'ny akora organika. Ny fako ara-tsakafo dia misy singa simika isan-karazany, toy ny starch, cellulose, lipida proteinina ary ny sira tsy an-tsokosoko, ary ny N, P, K, Ca, Mg, Fe, K, singa sasantsasany. Ny fako ara-tsakafo dia manana biodegradable tsara, izay mety hahatratra 85%. Izy io dia manana ny mampiavaka ny atiny biolojika avo, ny hamandoana avo ary ny otrikaina be dia be, ary manana sanda fanodinana ambony. Satria ny fako ara-tsakafo dia manana ny mampiavaka ny votoatin'ny hamandoana avo sy ny firafitry ny hakitroky ambany ambany, dia zava-dehibe ny fampifangaroana ny fako amin'ny sakafo vaovao miaraka amina bulking agents, izay mifoka ny hamandoana be loatra ary manampy firafitra hifangaro.
Ny fako ara-tsakafo dia misy kojakoja voajanahary betsaka, miaraka amin'ny proteinina crude 15% - 23%, tavy 17% - 24%, mineraly 3% - 5%, Ca ho an'ny 54%, sodium klôroida ho an'ny 3% - 4%, Sns
Manodina teknolojia sy fitaovana mifandraika amin'ny fanovana ny fako ho zezika organika.
Fantatra fa ny tahan'ny fampiasana ambany tahiry ao amin'ny fanariam-pako dia miteraka fahalotoan'ny tontolo iainana. Amin'izao fotoana izao, ny firenena mandroso sasany dia nametraka rafitra fikarakarana fako ara-tsakafo tsara. Any Alemana, ohatra, ny fako ara-tsakafo dia tsaboina indrindra amin'ny alàlan'ny fananganana composting sy anaerobic, mamokatra zezika organika manodidina ny 5 tapitrisa taonina avy amin'ny fako sakafo isan-taona. Amin'ny alàlan'ny fananganana fako sakafo any UK, manodidina ny 20 tapitrisa taonina ny famoahana CO2 azo ahena isan-taona. Ampiasaina amin'ny 95% ny tanànan'ny Etazonia ny zezika. Ny composting dia afaka mitondra tombontsoa isan-karazany amin'ny tontolo iainana, ao anatin'izany ny fampihenana ny fandotoana rano, ary ny tombony ara-toekarena dia lehibe.
♦ Tsy ampy rano
Ny rano no singa fototra amin'ny fako ara-tsakafo voaisa 70% -90%, izay fototry ny fanimbana ny fako. Noho izany, ny tsy fahampian-drano no ampahany manandanja indrindra amin'ny fanovana ny fako ara-tsakafo ho zezika organika.
Ny fitaovana fanomanana mialoha ny fako ara-tsakafo no dingana voalohany amin'ny fitsaboana ireo fako ara-tsakafo. Izy io dia ahitana indrindra ny Dewatering Systemà Feeding Systemà automativa Sorting Systemà Solid-Liquid Separatorà Oil-Water Separatorà In-vessel composter. Ireto misy dingana manaraka ny fizotran'ny fotony:
1. Ny fako ara-tsakafo dia tsy maintsy alohan'ny rano aloha satria be loatra ny rano ao anatiny.
2. Fanesorana ireo fako tsy biolojika amin'ny fako ara-tsakafo, toy ny metaly, hazo, plastika, taratasy, lamba sns ... amin'ny alàlan'ny fanasokajiana.
3. Ny fako ara-tsakafo dia alahatra ary alefa ao anaty mpampisaraka ranoka matevina ho an'ny fanorotoroana, tsy fahampian-drano ary fihenan'ny degreasing.
4. Ny sisa tavela amin'ny sakafo voamaina dia maina sy voadidy amin'ny hafanana avo mba hanalana ny hamandoana be loatra sy ny zavamiaina bitika samihafa. Ny fahamendrehana sy ny fahamainan'ny fako ara-tsakafo takiana amin'ny fanatanterahana ny zezika, ary ny fako ara-tsakafo dia azo alefa ao anaty kaontenera ao anaty sambo mivantana amin'ny alàlan'ny conveyor fehikibo.
5. Ny rano nesorina tamin'ny fako ara-tsakafo dia fifangaroan'ny diloilo sy rano, nosarahan'ny mpampisaraka rano-menaka. Ny menaka nosarahana dia voahodina lalindalina mba hahazoana biodiesel na menaka indostrialy.
Ny zavamaniry fanariana fako sakafo manontolo dia misy tombony amin'ny fivoarana avo, fandidiana azo antoka, vidiny ambany ary famokarana fohy.
♦ Ny zezika
Tankina fermentation dia karazana tanky mihidy tanteraka izay mampiasa teknolojia fanamasinana aerobika avo lenta, izay misolo ny haitao nentim-paharazana composting mahazatra. Ny mari-pana avo lenta sy ny fizotra composting haingana ao anaty tank dia mamokatra zezika avo lenta izay azo fehezina tsara kokoa sy marin-toerana kokoa.
Ny composting ao anaty sambo dia voahidy, ary ny fifehezana ny mari-pana no anton-javatra lehibe mandritra ny zezika. Ny famotehana haingana ny zavatra biolojika mora simba dia tratra amin'ny fitazonana ny toetr'andro mety indrindra amin'ny zavamiaina bitika. Ilaina ny fahazoana mari-pana avo lenta hampiasana zavamananaina bitika sy masomboly ahidratsy. Ny fermentation dia fanombohana ataon'ny zavamiaina bitika voajanahary ao amin'ny fako ara-tsakafo, manapotika ireo akora fanaovana zezika izy ireo, mamoaka ny otrikaina, mampitombo ny maripana mankany amin'ny 60-70 ° C ilaina hamonoana ireo otrikaretina sy masomboly ahi-dratsy, ary mifanena amin'ny fitsipika momba ny fikirakirana ny fako biolojika. Ny composting ao anaty sambo no manana ny fotoana lohanana haingana indrindra, izay afaka manary fako ara-tsakafo ao anatin'ny 4 andro. Rehefa afaka 4-7 andro monja dia nesorina ny zezika, izay tsy misy fofona, voadio ary manankarena amin'ny akora biolojika ary manana lanja mahavelona mifandanja.
Ity zezika biolojika tsy misy fofona, aseptika novokarin'ny composter ity dia tsy vitan'ny fitsitsiana ny tany feno mba hiarovana ny tontolo iainana, fa hitondra tombony ara-toekarena ihany koa.
Gzezika biolojika ranular mitana andraikitra lehibe amin'ny paikadim-pamokarana zezika eto an-tany. Ny lakilen'ny fanatsarana ny zezika biolojika dia ny misafidy milina fambolena zezika voajanahary. Ny granulation dia ny fizotry ny fitaovana miforona ho sombin-javatra kely, manatsara ny fananana ara-teknolojika ara-materialy izy io, manakana ny fanaovana mofomamy ary mampitombo ny fananana mikoriana, manome fahafaha-manao fampiharana vola kely, manamora ny fandefasana, ny fitaterana sns. amin'ny alàlan'ny milina fambolena zezika biolojika. Ny tahan'ny granulation ara-nofo dia mety hahatratra 100%, ary ny atiny biolojika dia mety hahatratra hatramin'ny 100%.
Ho an'ny fambolena maridrefy dia ilaina ny haben'ny sombiny sahaza ny fampiasana ny tsena. Ny masinantsika dia afaka mamokatra zezika biolojika misy habe samihafa, toy ny 0.5mm-1.3mm, 1.3mm-3mm, 2mm-5mm.Granulation ny zezika organika manome ny sasany amin'ireo fomba azo atao indrindra amin'ny fampifangaroana ireo mineraly hamoronana zezika misy otrikaina maro, ahafahana mitahiry sy manangona fonosana ary manome mora ny fitantanana sy ny fampiharana. Ny zezika biolojika granular dia mety kokoa hampiasaina, afaka amin'ny fofona manitra, masomboly, ary pathogen izy ireo, ary fanta-daza ny firafitr'izy ireo. Raha ampitahaina amin'ny zezika biby, dia misy azota (4,3) heny noho ny haben'ny biby, phosforous in-4 (P2O5) ary potasioma (K2O) 8,2 heny. Ny zezika granular dia manatsara ny fahaizan'ny tany amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haavon'ny humus, mariky ny famokarana tany maro no nohatsaraina: ara-batana, simika, fananana tany mikraoba ary hamandoana, rivotra, fitondrana hafanana ary koa vokatra azo.
♦ Maina sy mangatsiaka.
Masinina fanamainana amponga sy rotera dia matetika ampiasaina miaraka mandritra ny tsipika famokarana zezika organika. Esorina ny atin'ny rano amin'ny zezika biolojika, ahena ny mari-pana amin'ny granules, hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization sy ny deodorization. Ireo dingana roa dia afaka mampihena ny fahaverezan'ny otrikaina ao anaty granules ary manatsara ny fitrangan'ny sombintsombiny.
♦ Sivana sy fonosana.
Ny fizotry ny fizahana dia ny fanasarahana ireo zezika grila tsy feno kalitao izay vitan'ny milina fitiliana amponga rotary. Ireo zezika grika tsy voamarina dia alefa mba hikarakarana azy indray, mandritra izany fotoana izany ny zezika biolojika mahafeno fepetra dia fonosin'nymilina fonosana mandeha ho azy.
Tombontsoa azo avy amin'ny zezika biolojika sakafo
Ny fanovana ny fako ara-tsakafo ho zezika biolojika dia mety hiteraka tombony ara-toekarena sy tontolo iainana izay afaka manatsara ny fahasalaman'ny tany ary manampy amin'ny fampihenana ny fikaohon-tany sy fanatsarana ny kalitaon'ny rano. Ny gazy voajanahary sy biofuel azo havaozina dia azo alaina avy amin'ny fako ara-tsakafo voaverina, izay afaka manampy amin'ny fihenana entona entona famoahana sy fiankinan-doha amin'ny solika fôsily.
Ny zezika biolojika no sakafo mahavelona indrindra amin'ny tany. Loharanom-pisakafoanana tsara amin'ny zavamaniry izy io, ao anatin'izany ny azota, phosforus, potasioma ary micronutrients, izay ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamaniry. Tsy vitan'ny mampihena ny bibikely sy ny aretina ny zavamaniry, fa mampihena koa ny filàna fungicides sy simika isan-karazany.Zezika biolojika avo lenta hampiasaina amin'ny sehatra maro, anisan'izany ny fambolena, ny fambolena eo an-toerana ary ny fampiratiana voninkazo eny amin'ny habakabaka, izay hitondra tombony ara-toekarena mivantana ho an'ireo mpamokatra ihany koa.